Tagus Iris, ilay «premium» eReader vaovao avy any Casa del Libro | Ireo mpamaky rehetra
Joaquin Garcia | | Tranon'ilay boky, mpamaky
Omaly dia notantarainay anao ny fomba nanavaozan'i Onyx Boox modely iray avy aminy tamin'ny teknolojia Carta sy ny fomba ahatongavan'izany modely izany any Espana. Androany aho dia nieritreritra ny hijery ny tranonkalan'ny Casa del Libro, fivarotam-boky Espaniola izay miasa miaraka amin'i Onyx Boox sao misy zava-baovao… ary raha misy izany.
Casa del Libro dia efa mivarotra eReader iray avy amin'ny fianakaviana Tagus, fantatra amin'ny anarana hoe Tagus Iris, eReader izay misolo ny Tagus Tera ary na eo aza ny vidiny, mahaliana ny toetrany.
Ny famolavolana ny Tagus Iris dia mitovy amin'ny an'ny eReaders hafa, zavatra toa tsy miova. Ankoatra ny fananana ny bokotra afovoany dia manana i Tagus Iris ny bokotra eo anilany hamindra sy hamadika pejy.
Ny fitaovan'ity eReader ity dia mahaliana fa fantatra ivelan'ny sisintaninay. Ny mpikirakira dia fotony roa ao amin'ny 1,2 Ghz, processeur izay manana ondrilahy 512 Mb ary fitehirizana anatiny 8 Gb. Ny efijery dia manana habe 6 santimetatra, vita amin'ny ranomainty elektronika avy amin'ny marika E-Ink ary miaraka aminy Teknolojia taratasy. Ny vahaolana amin'ity efijery ity dia 1024 x 758 teboka miaraka amin'ny 212 dpi. Ity eReader ity dia manana jiro fampisehoana tsy manana tamberina tambiny, izany hoe tsy ho afaka hampiasa ny rantsan-tànantsika hamadika pejy isika.
Tagus Iris dia hamela antsika hihaino audiobooks na hanana taham-pandinihana ebook maimaim-poana
Ny bateria amin'ity fitaovana ity dia manana fahafaha-miaina 3.000 mAh izay mifanaraka amin'ny Casa del Libro mankany amin'ny pejy 8.000 na mihoatra ny iray volana ny fizakantena raha tsy mihinana fifandraisana Wi-Fi be loatra isika. Ho fanampin'izay, ity eReader ity dia manana output audio izay azontsika ampiasaina mba hihainoana podcast na audiobooks. Fa ny zavatra tsara indrindra amin'ity fitaovana ity dia ny rafitra miasa. Tagus Iris dia manana Android 4.2.2, kinova Android taloha nefa mahery vaika izay hamela anao hampiasa ny eReader ho safidy tsara hafa handraisana na hitandrina fandaharam-potoana. Tsy manadino fa afaka mametraka serivisy famakiana amin'ny alàlan'ny streaming na fampiharana hafa mitovy amin'izany isika.
Ny lafy ratsin'ity fitaovana ity dia ny vidiny. Tagus Iris dia mitentina 129,90 euro, vidiny lafo raha heverintsika fa ny maodely hafa toy ny Kobo Aura Edition 2 na ny Kindle Paperwhite dia kely ny vidiny ary manana pikantsary fikitika avo lenta kokoa. Ka toa mbola tsy mpifaninana henjana ho an'ny zazalahy lehibe i Tagus, na dia mitady zavatra mihoatra noho ny famakiana boky fotsiny aza ny mpampiasa, ny Tagus Iris dia mety ho safidy hafa. Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » Tagus Iris, ilay «premium» eReader vaovao avy any Casa del Libro
Salama Joaquín, tsingerintaona nahaterahako ity herinandro ity ary vao nomen'izy ireo ahy ny Taurus Iris. Mifanohitra amin'izay lazainao, manome toky anao aho fa afaka mamadika ilay pejy ianao amin'ny fikasihana ny efijery. Ary nahagaga ahy ihany koa fa tena mora tohina amin'ny fikasihana. Mirary ny soa indrindra
Mitady mpamaky boky afaka mamaky PDF tsara aho. Misy torohevitra ve? Izaho dia eo anelanelan'ny Tagus Iris 2017, ny Kobo Glo Hd, Kobo AuraEdiion 2 (tsy mahita fahasamihafana lehibe eo amin'izy roa ireo) sy ny Energy Sistem Pro HD.
Valio amin'i ANGEL
Ahoana no fomba fakana pikantsary amin'ny ebook tagus. ???
Lareca dia hoy izy:
Ry anjely, ny karazana sary pdfs dia tsy "lehibe" amin'ny mpamaky rehetra.
Anisan'ireo notsapaiko, ny fitaovana ONYX (ny TAGUS ankehitriny dia ONYX ihany koa) no tena mahomby amin'ny resaka pdfs.
Valiny tamin'i Lareca
Mateo dia hoy izy:
Ny Iris dia malemy paika, raha ny marina izao Casa del Libro dia tsy mivarotra izay tsy mahay mandanjalanja. Ny firavaka amin'ny satro-boninahitra dia ny Da Vinci.
Valiny tamin'i Mateo
Sabina dia hoy izy:
Nanana ny Tagus Iris aho nandritra ny 2 herinandro ary tokony hamafisinay ny hevitr'i Joaquín. Ny zavatra tokana lava dia ny fahaizan'ny bateria: raha tsy misy ny Wi-Fi ary tsy misy ny jiro (izay ampiasainy, mazava ho azy) dia zara raha afaka mamadika pejy 1000 - lavitra ny 8000 nampanantenaina, izay mahadiso fanantenana ahy kely aho satria io no nividianako azy indrindra….
Mamaly an'i Sabina
Tsoriko fa tezitra amin'i Tagus aho.
Mahatsiaro rovitra aho.
Herintaona sy tapany lasa izay dia nanapa-kevitra ny hanala ireo maodely Tagus Lux 2014 izy ireo (efa nanana modely vaovao eny an-tsena izy ireo) manolotra tolotra tsy azo resena (ao amin'ny fananganana fanta-daza momba ny fanoloran-tena fantatra ihany). Na eo aza ny fanamarihana sasantsasany, ny vidiny sy ny tombony azony dia mihoatra ny risika, noho izany dia nividy 2. Ary maninona, matetika dia mampiasa takelaka iray aho, ary ny boky no tena tiako hamakiana azy. Nieritreritra aho fa hamela ahy hiara-miasa amin'ny rahona manokana ny wifi, mba tsy hifandraisako tsy tapaka amin'ny solosaina. Naive izay ...
Ny iray tamin'izy ireo dia tsy naharitra herintaona.
Ny andro hafa dia nomen'izy ireo ahy ny fanazavana ara-teknika sahaza azy ireo, ary avy amin'ny kilasy fahatelo ho an'ny fianakaviako dia tsapako fa mety ho vaky ilay efijery izay tsy nisy olona nikasika (voaaro hatrany). Ratsy vintana. Ok tsy olana.
Ilay iray hafa, herintaona sy kely, mampiasa azy io am-pitandremana, miaraka amin'ny tariby tany am-boalohany hatrany, indray andro dia niseho tamin'ny pin tsy dia kely an'ny mpampitohy izy io, noho izany, lasa mafana be (may ny fikasihan-tanana) nivadika ho loza, ary tsy fantatry ny solosaina izany.
Ny fifandraisako amin'ny serivisy Tagus dia nivadika ho odyssey, ary ankoatr'izay dia "tsara vintana" foana aho nifandray tamin'ny olona tsy nanana faniriana hamaha ilay olana, ary tamim-panajana hita miharihary amin'ny tsy fisiany.
Farany, taorian'ny fanerena mafy dia tsara vintana aho nifandray tamin'ny olona mahay sy tapa-kevitra. Ankoatr'izay tena tsara. Nandeha tany amin'ny toeram-pivarotana izay nividianako azy aho, ary tao dia nanjary tsara tarehy sy tsy azo resena ilay fitsaboana.
Nandefa ny mpamaky tany Tagus izy ireo.
Efa ho 40 andro aty aoriana dia mamaly izy ireo fa tsy manamboatra izany ary averin'izy ireo amiko ny vola satria tsy manana boky mitovy intsony izy ireo. Raha ny marina, ny volontsôkôlà dia nohanin'ny orinasa, fa tsy Tagus, izay manana adidy hanana kojakoja, fa na izany aza ...
Ny fiainana bateria an'ny Tagus, horohoro. tsy misy maharitra.
Izaho dia nanana Papyre voalohany, Sony izay nanome ahy famakiana mahafinaritra mihoatra ny 5 taona, Inves, izay tsy dia nifankahalala tsara tamiko, sy ny Tagus, izay ny rafitra android dia voafetra tokoa, izay hany mahavita mamorona olana: araraka ny batterie amin'ny sento. Rehefa mampifandray ny Wi-Fi ka maharitra kely ny bateria, satria tsy afaka mametraka ny fanavaozana, izay mifandray hatrany amin'ny fanolorana soso-kevitra momba ny fividianana ao an-tranon'ilay boky, dia mihantona matetika izy io.
Ary na eo aza ny zava-drehetra, miaraka amin'ny olana mamaky boky novidiana tao an-trano tamin'ny boky, manaraka ny fizotrany rehetra.
Tsy afaka mametraka rindranasa toa ny dropbox na google drive. Eny, tsy misy, afa-tsy ny mailaka mailaka ahy, mba hahafahan'izy ireo mandefa fampielezan-kevitra amiko sns.
Ny mpamaky dia tsy takelaka. Saingy tsy faritan'izy ireo fa voafetra ny fifandraisana Wi-Fi ka tsy misy ilana azy afa-tsy ny fiantsenana ao amin'ny Casa del Libro. Ary mihantona matetika izy io.
Manantena aho fa amin'ny maodely vaovao, nihatsara ireo olana ireo, ary farafaharatsiny, ianao, nandany ny vola tamin'ny fitaovana amin'ny toe-javatra tsara.
Saingy mampitandrina anao aho fa tsy miraharaha izany i Tagus. Serivisy fivarotana mahatsiravina. Ratsy kokoa.
Ny vidin'ny fividianana dia tsy misy ifandraisany amin'ity tranga ity, satria namidy ihany koa tamin'ny pvp mahazatra amin'ny orinasa maro.
Ny mpanamboatra rehetra dia manana adidy amin'ny fivarotana ny lahatsorany amin'ny toe-piainana tonga lafatra. Ary raha tsy mahomby izy dia amboary ny korontana, tsy jerena ny vidin'ny fividianana.
Farafaharatsiny izay nividianako azy dia manandrana mitady vahaolana izy ireo, ary tsara ny fifampiraharahana, na dia tsy azoko antoka aza fa hahazo vahaolana mahafa-po aho: raikitra ny bokiko. Noho ny tsy fahampian'ny ezaka dia tsy hisy izany. Ny olana dia tsy miraharaha azy i Tagus.
Luis Diaz raha dia hoy izy:
Nampiasa Tagus nandritra ny taona maro aho. Ny Tagusiris farany dia naharitra 28 volana tamiko, ary io dia vokatry ny fanovana ilay teo aloha izay nomena fiantohana ary very tamin'ilay trano. Loza iray taorian'ny serivisy taorian'ny fivarotana
Amin'ity farany ity dia tsy afaka mameno ny bateria aho na mifandray amin'ny solosaina satria tsy mandeha ny mpampitohy USB mahazatra.
Ny fiainana bateria dia mahamenatra tato ho ato izay naharitra 300 pgs tamiko
Mitady vaovao hanovana fitaovana aho
Valio i luis diaz raha
Pocket for Chrome dia havaozina amin'ny vaovao tsara
Nanambara i Kobo fa mila mandeha manerantany ny fanombohana eReader